အူးလုံ - ဝီကီပီးဒီးယား
အူးလုံလက်ဖက် (ရိုးရှင်းတရုတ်: 乌龙; ရိုးရာတရုတ်: 烏龍 (ဝုလုံ, "နဂါးနက်")) သည် တရုတ်ရိုးရာ လက်ဖက်တစ်မျိုးဖြစ်၍ လက်ဖက်ရွက်များ လိပ်တွန့်မှုမရှိခင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဓာတ်တိုးစေခြင်း (semi-oxidation)၊ နေရောင်ခပ်ပြင်းပြင်းအောက်၌ ညှိုးခြောက်စေခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဓာတ်တိုးမှုဖြစ်စဉ်ပမာဏသည် မီးမပေးမီ၌ မျိုးမူကွဲနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတို့ပေါ်မူတည်၍ ၈% နှင့် ၈၅% ကြားတွင် ရှိနိုင်သည်။ အူးလုံလက်ဖက်သည် အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် နေထိုင်သော တရုတ်လူမျိုးများကြား အကြိုက်များသည်။
မတူညီသော အူးလုံလက်ဖက်ရည်ကြမ်းဖျော်နည်းပုံစံသည် အနံ့အရသာ အတော်ကွဲပြားနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၊ ထုတ်လုပ်ပုံတို့အပေါ်မူတည်ကာ အနံ့အရသာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ဖူးကျင့်မြောက်ပိုင်း ဝုယီတောင်တန်းထွက် အူးလုံလက်ဖက်များသည် အကျော်ကြားဆုံးတရုတ်လက်ဖက်များဖြစ်ကြသည်။ ကွဲပြားသော အူးလုံလက်ဖက်များကို ထုတ်လုပ်စီမံရာ၌လည်း ကွဲပြားသောနည်းစနစ်များကိုသုံးကြလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အရွက်များကို ထင်ရှားသော ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြ၏ ။ အချို့ကို ရှည်လျားတွန့်လိပ်သည့်အရွက်များရစေရန် လိမ့်ကြပြီး အချို့ကို အလုံး/အထုံးပုံစံနှင့် အငြှောင့်ပါစေရန် ပြုလုပ်ကြလေသည်။ ပထမပုံစံသည် ရိုးရာဟန်ဖြစ်၏ ။
၁၈၅၇ တွင် ရှိဟုန်ပေါင်ရေးသော "ဖူးကျင့် ထွေရာလေးပါးမှတ်စုစာ"တွင် တရုတ်ဝေါဟာရ အူးလုံ (ဝုလုံ) ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အနက်မှာ "အစိမ်းရင့်ရောင် လက်ဖက်" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အူးလုံလပ်ဖက်ခြောက်များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုချင်သည့် အရွက်၏ ကြေမွမှု၊ အညိုသမ်းမှုရစေရန် လုပ်ဆောင်ရသည့်အဆင့်များကို ထပ်ကျော့၍ ပြုလုပ်ကြလေ့ရှိသည်။ ညှိုးခြောက်ခြင်း၊ လှိမ့်ခြင်း၊ ပုံဖော်ခြင်း၊ မီးတိုက်ခြင်းတို့သည် အချိုခြောက် (black tea) နှင့်တူညီသော်လည်း ပြုလုပ်ကိုင်တွယ်ချိန်နှင့် အပူချိန်ကို ပို၍ ဂရုပြုကြရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Zhongguo Chajing pp. 222–234, 271–282, 419–412,[ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။] chief editor: Chen Zhongmao, publisher: Shanghai Wenhua Chubanshe (Shanghai Cultural Publishers) 1991.
↑ 施海根，中國名茶圖譜、烏龍茶黑茶及壓製茶花茶特種茶卷 p2，上海文化出版社 2007 ISBN 7-80740-130-3
↑ Joseph Needham, Science and Civilization in China, vol. 6, Cambridge University Press, 2000, part V, (f) Tea Processing and Use, pp. 535–550 "Origin and processing of oolong tea".
↑ van Driem 2019, p. 129.
↑ Donaldson၊ Babette (1 January 2014)။ The Everything Healthy Tea Book: Discover the Healing Benefits of Tea။ F+W Media။ ISBN 9781440574597။ 29 June 2016 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဤ အစားအစာနှင့် ဆက်စပ်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အူးလုံ&oldid=674233" မှ ရယူရန်
၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။